UPDATE: Odayaasha beesha degta Dhuusamareeb oo go’aan ka soo saaray xiisada DFS iyo Ahlu Sunna & Xaaladda oo.. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Odayaasha beesha degta Dhuusamareeb oo go’aan ka soo saaray xiisada DFS...
UPDATE: Odayaasha beesha degta Dhuusamareeb oo go’aan ka soo saaray xiisada DFS iyo Ahlu Sunna & Xaaladda oo..
Dhuusamareeb (Halqaran.com) – Kulan xasaasi ah oo ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka beesha degta Gurceel iyo Dhuusamareeb ayaa lagu soo gaba gabeeyey magaalada Dhuusamareeb.
Kulan ayaa waxaa lagu qaadaa dhigay doorka ay odayaasha deegaanku ka qaada karaan xal ka gaarista xiisadda siyaasadeed ee kasoo dhex cusboonaatay Ahlu Sunna iyo dowladda federaalka.
Odayaasha dhaqanka ayaa carabka ku adkeeyay inaan la aqbali karin in dagaal ka dhaco magaalada Dhuusamareeb, iyagoo isku dhaarsaday inay dhex dhexaad ka noqdaan siyaasadda cakiran ee Ahlu-Sunna iyo dowladda.
Sidoo kale, odayaasha ayaa iska xulay guddi ka kooban 11 xubnood, kuwaas oo waajibaadkoodu yahay inay soo ogaadaan qodobada heshiiskii ay horay u wada gaareen hoggaanka Ahlu Sunna iyo Xukuumadda Soomaaliya iyo waxa la isku fahmi waayey.
Gabagabadii kulankan, ayaa odayaashu sheegeen, in ay u kuur gali doonaan cidda uu dhankeeda ka fuli la’ayahay heshiiskaas, si loogu cadaadiyo garabkaas inuu dhaqan galiyo heshiiska.
go'aan ka soo saaray
Odayaasha beesha degta Dhuusamareeb
Xiisadda DF iyo Ahlu Sunna